treasure of my life, poems from my heart – 27 | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Daung Ni – 8888 Poem
Kyaw Thu – Q & A →
treasure of my life, poems from my heart – 27
ဘ၀ထဲက ရတနာ၊ ရင်ထဲက ကဗျာ (၂၇)
ကဗျာကလေးတပုဒ်ရေးမယ်လုိ့ စိတ်ကူးထုတ်တယ်။ စီးကရက်တဖွာ ကဗျာတပိုဒ် တရှိုက်ရှိုက် ခုံခုံမင်မင် နဲ့ အသံစဉ် ကာရန်အစဉ်ကလေးတွေကို စဉ်းစားတယ်။ စိတ်ထဲက တီးတိုးတီးတိုး ကဗျာစောင်းကြိုး ကလေး တို့ခတ်ပြီး အသံညှိကြည့်နေတယ်။
အရေးထဲ စီးကရက်မီးခိုးကလေးတွေနောက် အာရုံရောက်ရောက်သွားလို့ အတွေးလမ်းစ ပျောက်ပျောက် သွားလေရဲ့။
ဟယ် … ဒီဆေးလိပ်ကလဲ တမှောင့်။
ဒီဆေးလိပ်၊ ဒီစီးကရက်ကလဲ ကဗျာအတွေးကို အားပေးသလိုလိုနဲ့ အတွေးလမ်းကြောင်းပျက်အောင် နှောင့်ယှက်နေတယ်။
ဒီဆေးလိပ်နဲ့ မိတ်ဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့တာက တက္ကသိုလ်ရောက်မှ ဆိုပါတော့။ အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀ ရေစကြိုမှာနေစဉ်က သူငယ်ချင်းကိုတင်အောင် ယူယူလာလို့ သူ့အိမ်ပွဲရုံက ကိုယ်စားလှယ်ယူထားတဲ့ ပခုက္ကူ “မြို့တော်သုံး” ဆေးလိပ်ကို ဆေးလိပ်သောက်ကျင့်အဖြစ် နှစ်ယောက်သားသောက်ခဲ့ပါရဲ့။
ဒါပေမယ့် (၁၀) တန်းအောင်လို့ မန္တလေးတက္ကသိုလ်ရောက်ခါမှ နဂါးဆေးလိပ်နဲ့ ကပ္ပိတန်စီးကရက်ကို စွဲစွဲမက်မက် သောက်ခဲ့မိတယ်။
ကျောင်းသားဘ၀ မန္တလေးမီးရထားရပ်ကွက်ရဲ့ အရှေ့ဘက်၊ ဆေးရုံကြီးတောင်ဘက်၊ ကဗျာဆရာ ပန်းချီဆရာမျိုးမြင့်ဆွေတို့နေတဲ့ ရပ်ကွက်မှာ အပြင်ဘော်ဒါဆောင်ငှားနေကြတော့ မောင်စွမ်းရည်၊၀င်းကြွယ်၊ မုံရွာစောလွင်၊ ရေစကြိုကိုတင်အောင်တို့နဲ့ အတူနေဖြစ်တယ်။ အဲဒီဘော်ဒါကို ကဗျာဆရာ ကြည်အောင်လဲ အလည်လာလေ့ရှိတယ်။ တနေ့သားနေ့လယ်ခင်း ကြည်အောင်ရောက်လာ၊ နှစ်ယောက် သား စပ်မိစပ်ရာတွေပြော၊ ဆေးလိပ်တိုတွေ တပုံတပင်။ ညနေ
စောင်းတော့ ပြန်မယ်ပြင်တော့ …
ဆိုတဲ့ (၃) ကြောင်း ကဗျာတိုကလေး အမှတ်တမဲ့ ရေးခြစ်လိုက်မိတယ်။
၁၉၅၉ ခုနှစ်ကပါ။ ကျွန်တော့်ကဗျာစာအုပ် “ဖန်မီးအိမ်” ကဗျာများ ပုံနှိပ်နေဆဲကာလ။ အတူနေ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ မောင်စွမ်းရည်၊ ၀င်းကြွယ်၊ စောလွင်တို့က ဒီကဗျာတိုကလေးကို ကြိုက်လှချေရဲ့လို့ဆိုပြီး “ဖန်မီးအိမ်” စာအုပ်ထဲမှာထည့်ဖို့ တိုက်တွန်းကြတယ်။ ထည့်လိုက်မိတာနဲ့ ကဗျာဖတ်သူအများအပြားက စိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်။ ကဗျာဆရာကြီးဒေါင်းနွယ်ဆွေကလဲ ဒီကဗျာဟာ မှတ်တိုင်တတိုင်ဖြစ်လာမယ်လို့ မှတ်ချက်ချ နိမိတ်ဖတ်လိုက်ရဲ့။
အင်း … ဆေးလိပ်တို … လွှင့်ပစ်လို့လဲမရပါကလား။
လော့စ်အိန်ဂျလိမှာ မနှစ်က ဦးဝင်းဖေ (ဦးဇော်ဝိတ်) နဲ့ဆုံတော့ “ကျွန်တော်က ခပေါင်းစီးကရက်စွဲခဲ့တဲ့ သူဗျ။ တနေ့(၄-၅) ဘူးကုန်တယ်။ အခုတော့ ဖြတ်ပစ်လိုက်ပြီဗျို့။ စီးကရက်သောက်ရတဲ့စည်းစိမ်ထက် ကျန်းမာတဲ့စည်းစိမ်က ပိုပြီးဇိမ်ကျတယ်ဗျ” တဲ့။ ဦးဇော်ဝိတ်ကြီးစကား စိတ်ဝင်စားသွားတာရယ်၊ ကနေဒါတို့ဆီရောက်နေတဲ့အခိုက်ရယ်ကြုံတာနဲ့ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ (၁) ရက်နေ့က ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒေါက်တာအဲလစ်ကလဲ အကူအညီပေးတယ်။ (၄-၅) လခန့်ပြတ်သွားတယ်။ ချောင်းမဆိုးတော့ဘူး။
သြော် … အာသာရမ္မက်အဖြတ်ခက်ပါကလား။ ဥရောပရောက်တော့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ သူတို့တတွေ မြိန်မြိန်ရှက်ရှက် စီးကရက်တခဲခဲနေကြတာမြင်ရတော့ “မမေ့နိုင်ဘူး ကိုယ့်ချစ်ဦးရယ်” ဖြစ်သွားပြီး တလိပ်သောက်မိရုံနဲ့ မီးခိုးကြွက်လျှောက် ဘောင်းဘီမီးပေါက်တဲ့အထိဖြစ်ကရော။
ဒီနှစ် တိုကျိုအာဟာရစာကြည့်တိုက်က ကိုစိုးဝင်းရှိန်-မတင်တင်ဝင်းတို့အိမ်မှာ ရွှေပြည်စိုး မြန်မာ ဆေးလိပ်တလှည့်၊ မိုင်းလ်ဒ်ဆဲဗင်းတလှည့်သောက်နေတုန်း ဆေးလိပ်စီးကရက်အဖျက်သမားတွေကို စိတ်နာနာနဲ့ ကဗျာရေးမိတယ်။
လို့ ရေးချလိုက်တယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာရင် ဒီကဗျာကို ဆေးလိပ်၊ စီးကရက်ဗူးတိုင်းမှာ ကပ်ပေးပါလို့ အစိုးရကို တိုက်တွန်းမယ်။ ကလေးတွေနဲ့ လူငယ်လူရွယ်တွေ မသောက်ဖြစ်အောင်လို့။ ဒါပေမဲ့ အရိုးရင့်နေတဲ့ ဆေးလိပ်စွဲလူကြီးတွေကတော့ သောက်မြဲသောက်မှာပဲ။ မိုက်လက်စနဲ့ မိုက်မှာပဲ။ လူကြီးဆိုတာ တခါမိုက်ပြီးရင် လိမ္မာရမှာ အလွန်ဝန်လေးတယ်။ မယုံမရှိနဲ့။ ကိုယ်တွေ့။
အင်း … အစွဲ … အစွဲ မကောင်းတာစွဲမိရင် ရာသက်တိုင်ခိုင်မြဲတတ်ပါကလား။ အချစ်မြဲရင်ကောင်းပေမဲ့ ရမ္မက်စွဲရင် အသက်နဲ့လဲတတ်ပါတကား။
ခုတခေါက် တိုကျိုရောက်တုန်းရောက်ခိုက် နေရာအနှံ့ရောက်ဖူးတယ်ရှိအောင် မြို့ခံမိတ်ဆွေတွေက လိုက်ပို့ပေးကြတယ်။ ရှိဘူးယ ခေါ် ခွေးရုပ်ဘူတာက လူငယ်တွေ ညလုံးပေါက်မြူးကြတဲ့မြို့တော်တို့၊ ရှင်ဂျုကုက လူမိုက်ရပ်ကွက်၊ ဒုစရိုက်ရပ်ကွက်ဖြစ်တဲ့ ခါဘုခိချောရပ်ကွက်တို့၊ ဂျပန်ရိုးရာ လက်ဖက်ရည် ပွဲတို့၊ ချီးဗားမြို့ ပင်လယ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ နိုကိုဂီရိယာမတောင်ပေါ်က နိဟွန်ဂျိဘုရား (ဗုဒ္ဓရဲ့ကျောက်ဆစ် ရုပ်တုတော်) နဲ့ ရွှေသာလျောင်းဘုရားတို့ … စသည် … စသည် … နေရာအတော်စုံအောင် လိုက်ပို့ ပြသကြပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်မိ ကြည်နူးမိပါရဲ့။ ဒီလိုနဲ့ “တိုကျိုမှာခင်းတဲ့ မြန်မာကဗျာဈေး” ကဗျာတပုဒ် ရေးဖွဲ့မိပါတယ်။ တွေ့သမျှကြုံသမျှ ကဗျာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ချင်တဲ့ ၀ါသနာပဲဆိုပါ
မြတ်တာ မမြတ်တာ ပဓာနမထားဘဲ
ကဲ …. တွေးသမျှ ရေးသမျှကလေးတွေကို အဝေးကတင်ပြလိုက်ပါရဲ့။ ။
ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် အတွဲ (၁၁၅)၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၂
Posted by oothandar on August 7, 2011 in Tin Moe